Mba tsy ho sasatry ny miarina… | NewsMada
Mbola ny amin’ny fiatrehana ny ady amin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 ihany ny resaka. Tsy mankaleo ny resaka momba izany, tsy mandreraka, tsy mahakivy. Eny, na inona na inona no efa voalaza na ny tsy voalaza. Tsy azo lavina sy tsy takona afenina, mirongatra ny fihanaky ny valanaretina Covid-19 any Morondava amin’izao fotoana izao. Manaraka, ny ao Antsirabe. Tsy tongatonga ho azy izany, tsy kisendrasendra. Toerana mifanakaiky ireo, raha ny fifamoivoizana an-tanety no zohina.
Nahoana no ao Morondava no tena hoe nipoiran’ny valanaretina raha marina izay, indrindra irongatany izao indray? Fijerin’ny mpitsabo sasany, ohatra, ny hoe tsy nisy firy ny olona tratran’ny aretina tany an-toerana tamin’ny fotoana tena nampahery vaika azy saika nanerana an’i Madagasikara. Noho izany, tsy nisy firy na tsy ampy ny fitandremam-pahasalamana fisorohana ny aretina tsy hahazo ny tena sy tsy hiparitaka. Tsy mahagaga raha haingana be ny fiparitahany nony tafaverina tsy nampoizina.
Mety miara-dalana amin’izany ny maha toerana fizahantany an’i Morondava? Na ny maha toerana be mpivezivezy an’Antsirabe… Na inona na inona tombana ho antony, tsy azo lavina ny amin’ny tsy fitandremana ireo fepetra sy sakana ara-pahasalamana. Mifanandrify amin’ny fisokafan’ny sisintanin’i Madagasikara rahateo ny raharaha, ka mahabe ahiahy sy tombantombana. Tsy misy afa-tsy ny fiverenana amin’ny fitandremana izay anton’ny nahalavoana no hiarenana: hiatrehana ady, handresena…
Mba tsy ho sasatry ny miarina amin’izay atao, fa ady izao atrehina izao. Tsy mbola resy tosika tanteraka ny fahavalo tsy hita maso, tsy mifidy olona, miovaova be ihany… Ny ain’ny tsirairay no arovana ary ny firenena iray manontolo no jerena: tsy ekena raha ny tsy fitandremana kely ataon’ny olona vitsivitsy no hahatonga loza lehibe ho an’ny maro. Tsy mankaleo ny mamerina izany, tsy mandreraka, tsy mahakivy. Aleo mitandrina ihany! Mifampahatsiahy, mifanara-maso, mifampiteny…